Mkpado: nnyefe email | Martech Zone
Kpido: nnyefe email
Ọ bụrụ na enwere otu akụkụ nke ọrụ m nke na-aga n'ihu ịme m ka m tie isi megide mgbidi ahụ, ọ bụ nnapụta email. Anyị na-aga n'ihu na-eto eto ndenye aha nke ndị debanyere aha email mana geesh, ISP bụ ihe nzuzu. Na azụmaahịa, otu ihe na - eme bụ na ozi ịntanetị na - atụgharị ka ndị ọrụ na - abịa. Anyị ga-enwerịrị ndị debanyere aha na-emekọrịta mmekọrịta oge niile ruo ọtụtụ ọnwa wee - poof - ozi ịntanetị ibiaghachi. Ma ọ bụ ka njọ, ha na-ebugara ndị ọzọ
Ọtụtụ mmadụ anaghị achọpụta na enwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti nnabata email ma na-eme ya na igbe nnabata. Ikike maka onye na-ahụ maka email iji nyefee email gị ka akọwapụtara ma tụọ dị ka nnyefe. Mana nke ahụ pụtara na enwere aka n'etiti ndị sava ahụ anabatala email gị. Nke a apụtaghị na ọ dị ugbu a na igbe mbata onye debanyere aha gị. Ọ bụghị ihe ọhụụ na email ịnweta 100% deliverability na igbe mbata 0%